Nilaza ny mpitondra vaovao avy any Beijing ao Hong Kong fa antenainy ny hiverenan’ilay tanàndehibe amin’ny làlana marina · Global Voices teny Malagasy
Hanova ny politikany henjana ao Hong Kong ve i Beijing?
Voadika ny 17 Janoary 2020 5:05 GMT
Luo Huining. Sary: Apple Daily. Tsy azo ampiasaina ara-barotra
Kris Cheng no nanoratra ity lahatsoratra ity voalohany ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 6 Janoary 2020. Navoaka ato amin'ny Global Voices araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny lahatsoratra nasiam-panovana manaraka etoana.
Nilaza ny tale vaovaon'ny Biraon'ny Fifandraisan'i Beijing ao Hong Kong fa manantena ny hiverenan'ilay tanàndehibe haingana amin'ny lalana tokony hizorany izy.
Governoran'ny faritany Qinghai teo aloha i Luo Huining, 65 taona. Nisolo an'i Wang Zhimin izay tale nanomboka ny volana Septambra 2017 izy.
Nanaitra ny fanendrena an'i Luo andro asabotsy noho izy tsy manana traikefa amin'ny fitantanana ny raharaha sy ny raharaham-bahiny ao Hong Kong.
Tamin'ny 28 Desambra, voatendry ho filoha lefitry ny komity ara-bola sy ara-toekarena ao amin'ny Kongresy Nasionalim-bahoaka i Luo – andraikitra omena ireo izay hisotro ronono tsy ho ela. Nandray ny toerany izy herinandro talohan'ny nandefasana azy tany Hong Kong.
Raha nihaona tamin'ny mpanao gazety tao amin'ny Biraon'ny Fifandraisana ao Sai Wan ny Alatsinainy maraina dia nilaza i Luo fa efa niasa tao amin'ny tanibe izy ary tsy vahiny ao Hong Kong:
This will be a new mission, a new challenge to me. I will do my work well – with sincerity and true emotion.
Iraka vaovao, fanamby vaovao ho ahy izany. Hataoko tsara ny asako – am-pahatsorana sy amim-pihetseham-po marina.
Nidera an'i Hong Kong sy ny andraikiny izy amin'ny fanokafana sy fanaovana ho maoderina an'i Shina:
The motherland offers Hong Kong the strongest backing.
Manolotra ny fanohanana lehibe indrindra ho an'i Hong Kong ny tanibe.
Nanomboka ny volana Jona lasa teo, nivadika ho fihetsiketsehana narahina herisetra manohitra ny fihetsika nataon'ny polisy ny fihetsiketsehana manohitra ny volavolan-dalànan'ny fampodiana ary tao anatin'ny fitakiana ny demaokrasia sy ny hatezerana tamin'ny fitsabahan'i Beijing izany. Tsy nitsahatra nitaky fanadihadiana mahaleotena tamin'ny fihetsiky ny polisy, ny famotsoran-keloka ho an'ireo voasambotra, ny fahafahan'ny rehetra mifidy ary ny fampiatoana ny fiheverana ny fihetsiketsehana ho “rotaka” ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nilaza i Luo fa mampanahy ny toe-javatra ao Hong Kong tato anatin'ny enim-bolana lasa izay:
We all eagerly hope Hong Kong can return to the right track. As President Xi Jinping said in his new year remarks, without a harmonious and stable environment, there will not be a home where people can live and work in peace.
Manantena ny hiverinan'i Hong Kong haingana amin'ny làlana marina isika rehetra. Araka ny nolazain'ny filoha Xi Jinping tao anatin'ny fanamarihana nataony tamin'ny taombaovao fa raha tsy misy fiainana milamina sy mirindra dia tsy hisy toerana ahafahan'ny olona miaina miasa am-pilaminana.
Nilaza izy fa manome ny tombontsoa tsara indrindra ho an'i Hong Kong ny endrika “Firenena Iray, Rafitra Roa“:
I believe that, with the hard work of Chief Executive Carrie Lam, the government, and all sectors of society, the Chinese constitution and the Basic Law will be fully implemented in Hong Kong, the ‘One Country, Two Systems’ principle can be implemented smoothly and successfully in the long-term [and] the long-term prosperity and stability of Hong Kong can be ensured.
Mino aho fa, amin'ny asa mafy ataon'ny Lehiben'ny Mpanatanteraka Carrie Lam sy ny governemanta ary ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina dia hampiharina feno ao Hong Kong ny lalàm-panorenana Shinoa sy ny Lalàna Fototra, azo ampiharina moramora sy amim-pahombiazana amin'ny fomba maharitra ny fitsipika “Firenena Iray, Rafitra Roa” [ary] hampaharitra ny fanambinana sy ny fahamarinan-toerana ao Hong Kong.
“Matoky tanteraka izany aho,” hoy izy sady namokona totohondry. Tsy namaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety i Luo rehefa nandeha.
Ny niafaran'i Wang
Ny tatitry ny Xinhua izay nanambara ny fanendrena an'i Luo dia tsy nilaza ny momba izay ho toeran'i Wang izay nodimbiasany. Wang no nitana ny fotoana fohy indrindra tamin'ny tale rehetra hatramin'ny nitsanganan'ny birao tamin'ny taona 2000.
Nitanisa ny loharanom-baovao ny tranokalam-baovao manohana an'i Beijing, Bastille Post izay nilaza fa niverina tany Beijing i Wang ary ho lasa filoha lefitry ny Ivontoerana Foibe ho an'ny Tantaran'ny Antoko sy ny Fikarohana Ara-literatiora.
Taorian'ny nandresen'ny demaokraty tamin'ny fifidianana Filan-kevitry ny Distrika tamin'ny nahazoany vato betsaka tamin'ny volana Novambra dia nanonona tompon'andraikitra Shinoa iray tsy notononina anarana ny tatitra nataon'ny Reuters ary nilaza fa diso fiheverana tamin'ny toe-java-niseho tao an-tanàndehibe ny Ôfisy sy ny lehibeny, Wang Zhimin, ka mety hosoloina. Nilaza ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Shinoa fa diso ny tatitra. Nampanantena hanohy ny andraikiny any Hong Kong i Wang tamin'ny voalohandohan'ny volana Desambra.
Nilaza i Johnny Lau, mpandinika Shinoa efa zokiolona, nandritra ny Zaikabe RTHK tao an-tanàndehibe ny Alahady fa nanamarika fanovana paikady amin'i Beijing ny fanesorana an'i Wang:
This is not a change of policy. A tactical change means that the high-pressure tactics of the past six months, including tolerance of the police abuse of power and violence… cannot go on… [T]he response from Hong Kong people was very strong. Thus, the [policy] change temporary.
Tsy fanovana ny politika akory izany. Midika paikadin'ny tsindry mavesatra nitranga tato anatin'ny enim-bolana, anisan'izany ny fandeferana amin'ny fanararaotam-pahefana ataon'ny polisy sy ny herisetra… izay tsy tokony hitohy… ny fanovana paikady. Tena mavesa-danja ny valinteny avy amin'ny vahoakan'i Hong Kong. Araka izany, novaina vonjimaika ihany ny [politika].
Nilaza izy fa mety hifantoka bebe kokoa amin'ny olana ara-pivelomana i Luo, izay havanana eo amin'ny lafiny toekarena:
But we have to continue to see whether the hardline policy of Beijing will change.
Saingy mila manohy mijery isika raha hiova ny politika henjana ampiharin'i Beijing.